DAM3 Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Remagetsi Vagadziri & Vatengesi - China DAM3 Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Remagetsi Fekitori
Pfupiso yeDAM3-160 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora Iyo yakarongwa yekumisikidza voltage yeiyo Dada DAM3-160 yakaumbwa kesi redunhu mudariki inogona kusvika kusvika ku100V. Midziyo yemagetsi iyi inokodzera magetsi ekuparadzira maseketi ine inochinjika yazvino ye50-60Hz, yakatemwa magetsi ekushandisa inosvika ku750V, uye yakayerwa iriko kushanda kubva pa10A kusvika 100A. Iyo wedunhu breaker inoita basa rakakosha mukugovera simba uye kuchengetedza iyo yedunhu nemagetsi zvishandiso kubva pakuwandisa, maseketi mapfupi, uye un ...
DAM3-250 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora
PfupisoIyo ratidziro yazvino yeiyo Dada DAM3-250 yakaumbwa kesi redunhu mudariki inogona kusvika kusvika ku250A. Midziyo yemagetsi iyi inokodzera maseketi emagetsi ekuparadzira aine inochinjika yazvino ye50-60Hz uye yakarongwa yazvino inoshanda kusvika 1000A. Iyo inogona zvakare kushandiswa mumagetsi emagetsi ekushomeka kwekutanga uye kuwandisa kudzivirirwa pamwe nekudzivirirwa kubva kukufupi kutenderera uye kusagadzikana kwemamiriro ezvinhu. Kuenzaniswa neiyo DAM1 yakateedzana, iyo DAM3 yakateedzana yakagadzirirwa vhoriyamu diki, yakakwira ...
DAM3-400 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora
PfupisoIyo ratidziro yazvino yeiyo Dada DAM3-400 yakaumbwa kesi redunhu mudariki inogona kusvika kusvika ku400A. Midziyo yemagetsi iyi inokodzera kuchengetedza maseketi emagetsi ekuparadzira aine inochinjika yazvino ye50-60Hz uye yakatarwa yazvino inoshanda kusvika 1000A. Iyo inogona zvakare kushandiswa mumagetsi emagetsi ekushomeka kwekutanga uye kuwandisa kudzivirirwa pamwe nekudzivirirwa kubva kukufupi kutenderera uye kusagadzikana kwemamiriro ezvinhu. Kuenzaniswa neiyo DAM1 yakateedzana, iyo DAM3 yakateedzana yakagadzirirwa smal ...
DAM3-1000 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora
MhedzisoIiyo ratidziro yazvino yeDAM3-1000 yakaumbwa kesi redunhu breaker inogona kusvika ku690A, inowanzo shandiswa mune yemagetsi kugovera dunhu kugovera simba uye kuchengetedza dunhu nemidziyo yemagetsi kubva pakuwandisa, dunhu pfupi, pasi pemagetsi kukundikana kukuvara, mune inochinjisa yazvino 50 -60Hz, yakatarwa yakananga-ikozvino 1000A. Inofananidzwa neiyo DAM1 yakateedzana, iyo DAM3 nhevedzano yakagadzirirwa vhoriyamu diki, yakakwira kutyora chinzvimbo, ichipa zvirinani kuchengetedza simba. Magetsi Parameter dzeDAM ...
DAM3-1600 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora
PfupisoIyo ratidziro yazvino yeiyo Dada DAM3-1600 yakaumbwa kesi redunhu mudariki inogona kusvika kusvika 1600A. Midziyo yemagetsi iyi inokodzera kuchengetedza maseketi emagetsi ekuparadzira aine inochinjika yazvino ye50-60Hz uye yakatarwa yazvino inoshanda kusvika 1000A. Iyo inogona zvakare kushandiswa mumagetsi emagetsi ekushomeka kwekutanga uye kuwandisa kudzivirirwa pamwe nekudzivirirwa kubva kukufupi kutenderera uye kusagadzikana kwemamiriro ezvinhu. Zvichienzaniswa neiyo DAM1 yakateedzana, iyo DAM3 yakateedzana yakagadzirirwa sm ...
DAM3-630 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora
Mhedziso Iyo yakatarwa ikozvino yeDAM3-630 yakaumbwa kesi redunhu mudariki inogona kusvika kusvika ku630A. Midziyo yemagetsi iyi inokodzera kuchengetedza maseketi emagetsi ekuparadzira aine inochinjika yazvino ye50-60Hz uye yakarongwa yazvino inoshanda kusvika pa1000A. Iyo inogona zvakare kushandiswa mumagetsi emagetsi ekushomeka kwekutanga uye kuwandisa kudzivirirwa pamwe nekudzivirirwa kubva kukufupi kutenderera uye kusagadzikana kwemamiriro ezvinhu. Iwo ma breaker wedunhu anoratidzira hunhu hwediki vhoriyamu, yakakwira b ...